अहिले नै सुरू गर्नुहोस् | नार्कोनन
आजबाट नै सुरू गर्नुहोस्
तलको फाराम भर्नुहोस् र नार्कोननको परामर्शदाताले तपाईंलाई पूर्व भर्ना सुरू गर्न सहयोग गर्नुहुन्छ।
नार्कोनन पूर्व-मुल्याङ्कन प्रश्नावली
१. तपाई कसको लागि सहयोगको खोजीमा हुनुहुन्छ:
तपाईंले चिनेको व्यक्तिको लागि
१क. तपाईंले चिनेको व्यक्तिको लागि हो भने, उक्त व्यक्तिसँग तपाईंको के सम्बन्ध छ:
२. तपाईंले अरू कुनै लागुऔषध सुधार कार्यक्रम गर्नुभएको छ, छ भने कुन कुन:
३. के लागुऔषध वा मादकपदार्थ सेवन बाहेक अरू कुनै कुराको बारेमा सल्लाह सुझाव पाउनु भएको छ? पाउनु भएको छ भने कस्तो सल्लाह पाउनु भएको छ कृपया उल्लेख गर्नुहोस:
४. प्रयोग गरेका लागुऔषधको र कसरी-कहिले देखी कुलतमा लागेको भनी छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस:
५. तपाईंको सम्पर्क जानकारी:
हामी तपाईंको गोपनीयताको इज्जत गर्छौँ भनी ढुक्क रहनुहोस्। दिइएको सबै जानकारी पूर्ण रूपमा गोप्य राखिन्छ। थप जानकारीको लागि हाम्रो गोपनीयता नियम पढ्नुहोस्।
तपाईंको निः शुल्क सूचना पोर्टफोलियो अनुरोध गर्नुहोस् पछिल्लो
तपाईंको निः शुलक सूचना प्याकेट अनुरोध गर्नुहोस्
नार्कोननको पूर्व-मुल्याङ्कन प्रश्नावली
तपाईंको निः शुल्क सूचना पोर्टफोलियो अनुरोध गर्नुहोस्